कुदाकुदमै बित्ने भो चैत - विचार - कान्तिपुर समाचार
चैत्र १७, २०७५ अजय रिसाल
काठमाडौँ — ‘ओ हो ! त्यहाँ पनि भएन । अब के गर्ने होला ?’ ‘त्यो स्कुल त राम्रै छैन रे ! सबै नेपाली भाषामा मात्र । इंग्लिस सिक्ने इन्भारमेन्ट नै छैन ।’ ‘ओहो, कस्तो महँगो त्यहाँ त ! तर के गर्नु, आफू नखाएरै ’नि बच्चालाई राम्रो गराउनैपर्‍यो !’ ‘फ्युचर स्कोप राम्रो भएको स्कुलमा पढाउन त बच्चा मात्र राम्रो भएर पुग्दैन, आमाबाबु पनि इन्टरभ्युमा पास हुनुपर्ने रे ! पैसै तिरेर पढाउन पनि कति गाह्रो !’
‘नाइँ, म त यही स्कुल पढ्छु । साथीहरू पनि कतै नजाने रे ! त्यहाँ त जाँचमै पनि म जे पायो त्यही लेखेर आउँछु । म त अन्त कतै जान्नँ ।’
चैतको महिना । बच्चा भर्नाको मौसम । यस्तै–यस्तै गाइँगुइँ, छलफल, कुराकानी चलिरहन्छ साथीभाइबीच अनि घरभित्र पनि । अभिभावकहरू चिन्तित, तनावमय वातावरणमा । बालबच्चा त तनावमा रहने नै भए । दौडधूप, प्रतिस्पर्धा, खिचातानी, भनसुन ।
कहिलेकाहीं म आफ्नै मेडिसिन शिक्षाको समय सम्झन्छु । एमबीबीएस छात्रवृत्ति अनि एमडीका लागि यस्तै तनावमय चरण पार गरिएको थियो । इन्ट्रान्स, इन्टरभ्यु, मक–एक्जाम, कोचिङ ... हरे, ती क्षण त कसरी पो बिर्सिएइला र ! ती त म किशोर–युवावस्थामा रहँदाका समय थिए । प्रतिस्पर्धामा पनि छुट्टै रमाइलो, फरक किसिमको हुटहुटी, लगाव अनि तनाव नै पनि कति मीठा !
मैले अहिले उठाउन लागेको प्रसंग भने कक्षा १ को भर्नाको हो । कलिला ६–७ वर्षे बालबालिकाको शिक्षाको सन्दर्भ हो यो । यी कोपिलाहरूले सानै उमेरदेखि नै यस्ता नचाहिँदा प्रतिस्पर्धा, खिचातानी, एक स्कुलबाट अर्को स्कुल, एउटा साथी सर्कलबाट अर्को, निजी र सरकारी, गरिबले पढ्ने र धनीले पढ्ने, पैसा कम लाग्ने र बढी लाग्नेजस्ता अनावश्यक अनि हानिकारक अवस्थामा नै गुज्रनुपर्ने हो त ? अभिभावकहरूले पनि आफ्ना बच्चाहरूलाई स्कुल पढाउन यसरी नै दौडधूप, भनसुन अनि अत्यधिक खर्च गर्नुपर्ने नै हो त ? मौलिक अधिकार, शिक्षामा सबैलाई समानता अनि राज्यको हिस्सा खोइ त ?
केही वर्ष यताका चैत–वैशाखका वासन्ती समय यस्तै–यस्तै सोचाइमा बित्ने गरेका छन् मेरा । अहिले आफूले नै प्रत्यक्ष अनुभव गरिरहेछु म अभिभावकीय तनाव । समवयी साथीभाइ अनि बन्धुबान्धवका भनाइ र भोगाइ सुन्दा–बुझ्दा साह्रै नमीठो महसुस भएर कलम चलाउन विवश भएको छु म अहिले ।
उपर्युक्त पाँच उद्धरणमध्ये चार अभिभावकसँग अनि अन्तिम एक बालबालिकासँग सम्बन्धित छ ।
सुरु गरौं बालबच्चाको कोणबाट । यो मेरो निजी अनुभवसँग सम्बन्धित छ । मेरी छोरी आफैले यूकेजी पढेको विद्यालयसँग नै सन्तुष्ट छ । उसका साथीभाइ पनि त्यही स्कुलमा नै रमाएका छन् तिनको भनाइमा । उसको साथी सर्कलबाट ऊ छुट्टिन चाहन्न । ६ वर्ष पूरा गर्न लागेकी छोरी आफ्ना आमाबाबु अनि अभिभावक, हजुरबुबा–हजुरआमाबीचको घरायसी कुराकानी बुझ्छे पनि ।
आमाबाबुलाई छोराछोरी अझै बढी स्कोप (?) भएको विद्यालयमा पढून् भन्ने सोच आउनु अस्वाभाविक होइन । तर बालबच्चाको मनोविज्ञान भने आफू भिजिसकेको वातावरणबाट अन्यत्र नयाँ परिस्थितिमा जान नपरोस् भन्ने होला । यस्तो असामञ्ज्यस्यमा उनीहरूमा ‘जे पायो त्यही लेखिदिने’ या अन्यत्र जाँदै नजाने भन्ने किसिमको विद्रोही (?) भावना आउनु या चिडचिडे या रुन्चे बन्नु पनि त असामान्य नहोला ।
अभिभावकको तनाव भने अर्कै छ, चर्कै छ । तिनलाई साथीभाइ या समाजसामु राम्रो (महँगो) स्कुलमा पढाउनु छ । अंग्रेजीमा पोख्त भएर भविष्यमा राम्रो ठाउँ (देश) मा सेटल हुन सक्ने उम्मेदवार तयार गर्नु छ । अनि हाम्रो समाज यसरी तीव्र व्यावसायिकतामा डुबिसकेको छ, महँगो भनेकै राम्रोको पर्यायवाची हुने कुरा शिक्षामा पनि लागू हुन जान्छ । त्यसैले तिनलाई छटपटी छ, कुदाकुदमै बित्छ बाबुआमाको चैत । त्यो सँगसँगै तिनमा उत्पन्न हुने आवेग, रोष, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको सिलसिला । यसको लेखाजोखा गर्ने कसरी ? अनि कसले ?
यसैसँग सम्बन्धित बालमनोविज्ञानको परीक्षण कसरी गर्ने ? ६–७ वर्षको उमेरदेखि नै नाम निस्केको/ननिस्केको, पास–फेल, पढाउन सक्ने–नसक्ने बाबुआमा, सरकारी/बोर्डिङ स्कुल, परम्परागत/प्रगतिशील पढाइ, नेपाली/अंग्रेजी माध्यम, बोर्डर्स/डे–स्कलर भन्नेजस्ता तथाकथित विभाजनका खाडल बाल मस्तिष्कमा बन्दै छ । भविष्यमा बालकबालिकाले कसरी समाजमा पहिचान बनाउन सक्लान् ? १ कक्षाको इन्ट्रान्समा कुनै नाम चलेको स्कुलमा नाम निकाल्न नसक्ने बच्चाको स्वत्वमा कस्तो असर पर्न जाला ? म अक्षम, फलाना सक्षम भन्ने छाप परेको बाल मनोबल विकसित हुन्छ भविष्यमा ।
अनि त्यस्तो अक्षम (?) बच्चाको अभिभावकको मानसिकता कस्तो रहला ? त्यस बच्चाप्रति ? स्कुलप्रति ? अनि समाजप्रति ? समष्टिमा यस राष्ट्रप्रति ? के यसले देशलाई नै असर नपुर्‍याउला अप्रत्यक्ष नै भए पनि ?
यस्तो अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा फाइदा भने कसलाई पो पुग्दो होला त ? बिचौलियालाई ? भनसुन गरिदिनेलाई ? या त स्कुललाई ? हानि छ त त्यो बच्चालाई जसको सुन्दर भविष्यको कामना गर्छौं, हामी अभिभावक । हानि छ त ती अभिभावक जसले आफ्ना सारा ऊर्जा दौडधूप, भनसुन अनि प्रतिस्पर्धामै लगाएका छन् । हानि छ त्यो राष्ट्रलाई, जसका बालबालिका सानैदेखि एकअर्काप्रति शंकालु र ईर्ष्यालु बन्न पुग्छन् जिज्ञासु अनि ज्ञानपिपासु बन्नुभन्दा । अनि त्यसरी रोपिएको ईर्ष्याको बीजले सुन्दर–शान्त उपवन कसरी बनाउला ? सानैदेखि जेमा पनि प्रतिस्पर्धा नै भन्ने भावना आउँदा सहअस्तित्व र समाजवाद कसरी झाँगिएला ? सबैले सोच्नुपर्ने विषय होइन र यो ?
‘शिक्षामा समान पहुँच’ को घोषणा गर्ने सरकार, ‘शिक्षालाई मौलिक हक’ मान्ने संविधान एवं कानुन किन र कसरी यसमा चुप रहन सकेका होलान् ? शिक्षालाई यसरी तीव्र व्यवसायीकरण गर्न मिल्ला र ? त्यही पनि विद्यालय प्रवेश गर्ने कक्षा १ को समयमा ? कलिला बालबालिकाको शिक्षामा ? यसमा विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन र ? यो समस्यालाई यसरी नै यस्तै रूपमा छाडिदिने हो भने त्यो दिन टाढा छैन यसरी शिक्षा पाएका भविष्यका कर्णधारहरू नैतिक शिक्षा, सामाजिक शिक्षा अनि देशभक्तिको शिक्षाको अभावमा अधुरा नागरिक बन्न पुग्नेछन् ।
लेखक धुलिखेल अस्पतालका मानसिक रोग विशेषज्ञ हुन् । प्रकाशित : चैत्र १७, २०७५ ०७:३४
निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा पाइने शहरी स्वास्थ्य केन्द्रमा विरामी कमै पुग्छन् । कतिपय औषधी खपत नभै म्याद सकिएर जाने स्वास्थ्यकर्मी बताउँछन् ।
चैत्र १७, २०७५ फातिमा बानु
काठमाडौँ — महानगरपालिकाअन्तर्गतका सहरी स्वास्थ्य केन्द्रबारे जनचेतना नहुँदा निःशुल्क पाइने औषधि खेर जाने गरेका छन् । काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र हाल २७ वटा सहरी स्वास्थ्य केन्द्र छन् जहाँ कम्तीमा ४४ र बढीमा १ सय थरि निःशुल्क औषधि र आधारभूत स्वास्थ्य उपचार सेवा पाइन्छ ।
निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा पाइने यस्ता केन्द्रमा न्यून रूपमा मात्रै बिरामी छिर्ने गरेको स्वास्थ्यकर्मी बताउँछन् ।
४४ थरी औषधि निःशुल्क औषधि उपलब्ध नयाँ बानेश्वरस्थित सामुदायिक सहरी स्वास्थ्य क्लिनिकमा मुस्लिकले दैनिक १२ बिरामी आउँछन् । क्लिनिकका जनस्वास्थ्य अधिकृत गौतमराज बज्राचार्यका अनुसार यहाँ क्षयरोगको नियमित औषधि सेवन गर्ने बिरामी मात्रै बढी आउँछन् ।
सिटामोल, एन्टिबायोटिक, परिवार नियोजनका सामग्रीबाहेक अन्य औषधि कम मात्रामा मात्रै उपयोग हुन्छ । उनी भन्छन्, ‘अहिले त प्रेसर सुगरका औषधि पनि निःशुल्क औषधिमा समेटिएका छन् । घरैपिच्छे यो रोगका बिरामी छन् भन्छन् । बाहिर महँगो तिरेर खान्छन्, यहाँ निःशुल्क पाइने औषधि ‘डेट एक्सपायर’ भएर खेर जान्छ ।’
गर्भवती जाँच, खोप, झाडापखाला र निमोनियालगायत आठ थरी स्वास्थ्य सेवा पाइने यस केन्द्रबारे जनचेतनाको कमी हुँदा प्रभावकारी हुन नसकेको महानगरको सहरी स्वास्थ्य तथा खाद्यपदार्थ महाशाखाका निर्देशक नरेन्द्र बज्राचार्यले बताए । उनले भने, ‘विशेषगरी मजदुर, सुकुम्बासी र गरिब मात्रै यहाँको सेवा दिन आउँछन्, तीमध्ये पनि धेरैलाई यसबारे थाहा छैन ।’ निजी अस्पतालमा महँगो पर्ने खोप पनि यहाँ निःशुल्क पाइने उनले बताए ।
२५ वर्षदेखि सञ्चालनमा आएका सहरी स्वास्थ्य केन्द्रप्रति सर्वसाधारणको आकर्षण बढ्न सकेको छैन । स्वास्थ्य नियमावली अनुसार १३७ थरी औषधि निःशुल्क पाइने भनिए तापनि सबै औषधि केन्द्रमा उपलब्ध छैनन् । भौतिक पूर्वाधारको कमीका कारण यस्ता केन्द्र वडा, कार्यालय, स्थानीय तहका सामुदायिक भवन र क्लबका साँघुरा कोठाबाट सञ्चालन हुँदै आइरहेका छन् ।
थोरै स्वास्थ्य केन्द्रमा मात्रै बेडसहितको सेवा छ । सबै केन्द्रमा आवश्यक अनमी, अहेब, जनस्वास्थ्य अधिकृतजस्ता कर्मचारी पनि पुग्दो मात्रामा छैनन् । वार्षिक ६ करोड ९० लाख बजेट छुट्याइने यस्ता स्वास्थ्य केन्द्रको प्रचारप्रसार हुनुपर्छ । प्रचारप्रसार हुन नसक्दा एकातिर बिरामीले निःशुल्क पाइने औषधि किनेर खाइरहेका छन् भने अर्कातिर खपत हुन नसक्दा औषधि खेर गइरहेका छन् ।
महाराजगन्जस्थित वडा ३ सहरी स्वास्थ्य केन्द्रमा सुगर र उच्चरक्तचापका औषधिको बढी माग छ । मागअनुसार औषधि नपुग्ने केन्द्रकी इन्चार्ज सिर्जना पाठकले बताइन् । उनले भनिन्, ‘दमरोगका औषधि म्याद सकिएर खेर जान्छन् । परिवार नियोजनका सामग्रीका लागि बढी जान्छन् ।’ केन्द्रसम्बन्धी जनचेतना बढाएर निःशुल्क औषधि खेर जानबाट जोगाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । पाँच जनशक्तिको दरबन्दी भएको यो केन्द्र दुई कर्मचारीको भरमा चलिरहेको छ । आफ्नै भवन नहुँदा दैनिक ४५ बिरामी आउने यो केन्द्र भाडाको घरबाट चलिरहेको छ ।
संघीय संरचनामा सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पनि सहरी स्वास्थ्य केन्द्रमै गाभिने भनिएको छ । हालसम्म काठमाडौंका सबै प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र यसमा मिसिन सकेका छैनन् । एउटै खाले सेवा दिने यस्ता केन्द्र गाभिन सके सेवा प्रभावकारी हुने निर्देशक बज्राचार्यले बताए । उनले भने, ‘सहरी स्वास्थ्य केन्द्रको महत्त्वबारे धेरैले बुझेका छैनन् । अस्पताल र क्लिनिक छ्याप्छ्याप्ति भएको ठाउँमा यस्तो केन्द्र नचाहिने तर्क बेकार हो ।’
आधारभूत स्वास्थ्य उपचार सेवा विस्तारका लागि महाशाखाले काठमाडौं महानगरपालिकामा ११ वटा स्वास्थ्य प्रवर्द्धन केन्द्र खोल्ने तयारी गरिरहेको छ । यस्ता केन्द्रमा डाक्टरसहित ल्याब, भिडियो एक्सरे लगायत सेवा निःशुल्क प्रदान गर्ने निर्देशक बज्राचार्यले जानकारी दिए । उनले भने, ‘हाम्रो तर्फबाट सबै तयारी भइसक्यो । सरकारको अनुमतिपत्र मात्रै कुरिरहेका छौं ।’ यस्ता केन्द्र सञ्चालनका लागि महाशाखाले २ करोड ८० लाख बजेट छुट्याएको उनले बताए ।
प्रकाशित : चैत्र १७, २०७५ ०७:२९